Sivana ao Ozbekistan : Arakaraky ny Mampiovà Azy, Vao Mainka Ny Eo Ihany no Eo? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jolay 2018 7:08 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Français, русский, Italiano, македонски, English
Andalam-piovàna i Ozbekistan ankehitriny, izay aloha no lazaina amintsika hatreto. Hatramin'ny nahafatesan'i Islam Karimov tamin'ny 2016, mpitondra ny firenena nandritra ny telopolo taona teo ho eo, nanokatsokatra ny varavarany ilay repoblika sovietika taloha izay manana mponina 33 tapitrisa. Miha-raisina foana ireo mpizahatany ao amin'ity repoblikan'i Azia Afovoany ity, ary ankehitriny dia mitodika any amin'izao tontolo izao ny fanjakana mba hampiasa vola, hahazoany famatsiambola ary hikolokoloany fifandraisana tsaratsara kokoa miaraka amin'ireo firenena manodidina ny taniny izay tena voahodidina tanteraka. Ny mpandimby an'i Karimov, Shavkat Mirziyoyev, dia nankalaza ampahibemaso ny fandraisana anjaran'ilay mpanoro-hevitra azy taloha, no sady niezaka ny tsy hiresaka momba ireo fotoana maizina nodiavina nandritra ny fitondrana lavabe sy mpamoritra.
Na izany aza, hatraiza no halehan'i Ozbekistan ao anatin'ny finiavany hanatsahatra ny asa an-terivozona ? Afaka mahatoky ireo fampanantenana nataon'ny fanjakana mba hanafoanana ny fampijaliana any amin'ny fonjan'ny firenena [en] ve? Hanaiky ny fisiana gazety mpitsikera sy mpanohitra ara-politika, na dia malemy aza, ve ny fanjakana?
Efa nitafa tamin'i Oumida Akhmedova ny Global Voices tamin'ny 2015. Niverina niresaka taminy indray izahay tamin'ny jona 2018, volana vitsivitsy taorian'ny nahazoany fanasàna somary mampiahiahy sady vao voalohany mba hampisehoany ireo sary farany nopihany any amin'ny efitra manokana fampirantiana taokanto ao Tachkent, renivohitra ozbeky. Nasaina hanolotra ny asany miaraka amin'ny vadiny izy, Oleg Karpov, ilay mpamokatra sarimihetsika.
[Fanamarihan'ny fanoratàna : Nanambara [en] ny delegasiona ozbeky, vao haingana, fa tsy hahakasika ny zon'ireo olontsotra pelaka (LGBT) ireo fanavaozana ao amin'ny firenena. Mbola tsy ara-dalàna foana ny fiarahan'ny mitovy fananahana ao amin'ny firenena. Mpandalina sasany no nahamarika fa mihamiraikitra lalindalina kokoa [en] ao amin'ny fitondrana vaovao ny firaketana ny lova ara-tsosialy, izay mibaribary fa misy idiran'ny sivana.]